Jubbaland oo Warqad cabasho ah u dirtay Farmaajo [Akhri Sababta]
By Wariyaha Kismaayo , GAROWE ONLINE
KISMAAYO, Soomaaliya - Maamulka Jubbaland ayaa warqad cabasho ah u diray Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Warqadan oo kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Axmed Madoobe, ayaa waxay Jubbaland uga cabaneysaa go'aanno kasoo baxay dhawaan Taliska Ciidamada Xoogga dalka, oo ku saabsan arrimaha Ciidamada iyo amniga deegaanada maamulkaasi.
Jubbaland ayaa ka cabanaysa qodobada soo socda;
1 - In la baabi'yay heykalkii xiriirka iyo Taliska ee ka dhaxeeyay guutada 43-aad iyo hogaanka Ciidamada xoogga dalka ee SNA,
2 - Magacaabista Taliye cusub degmada Ceel-Waaq, halkaasi oo aan horey u lahayn saldhig Military, iyadoo aan ka warheyn islamarkaana lagala tashan taliska guutada 43-aad ee ka howlgala Jubbaland,
3 - In hub iyo saanad Ciidan ay Xildhibaanno katirsan labada golle ee Baarlamaanka Federaalka [Gollaha shacabka iyo Aqalka Sare] ay geeyeen degmada Ceel-Waaq, kaasi oo ku dhacay gacanta Al-Shabaab,
4 - In Taliska SNA oo jahwareer ka abuuray deegaanka Sanguuni, halkaasi oo ciidamada difaaca hore uga jiray la siiyay amaro is-khilaafsan oo sababay inay guul-dareysteen, islamarkaana Al-Shabaab la wareegto saldhgooda, oo ka qaadatey hub iyo agabkii ay ku howlgalayeen,
5 - In Taliska SNA uu ka abuuray deegaanada Jubbaland xaalad kalsooni darro, oo keeni karta colaad u dhaxeysa beelaha wada deggan, taasoo dib usoo nooleyn karta dagaalkii Sokeeye,
6 - Tallaabooyinka Taliska SNA ayaa hakad gelisay, xadiday sidoo kalena siyaasadeysay saanadii Ciidamada ku sugan Jubbaland xilli ay 33 goobood ay kala dagaalamayaan cadowga Al-Shabaab,
7 - Gollaha amaanka Jubbaland ayaa walaac ka muujiyay soo-jeedinta gudiga amniga iyo nabada Ururka Midowga Africa ee ah in la baabi'iyo qeybta 6aad ee howlgalka AMISOM, oo baahi ka badan markiii la abuuray hadda loo qabo.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa uga mahadceliyay dalalka Ciidamada ugu deeqay Howlgalka AMISOM taageeradooda ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyo kaalintooda la dagaalanka Al-Shabaab.
Khayre oo ku wajahan Kismaayo, Wafdi iyo ilaaladiisa oo kahor maray
Soomaliya 07.03.2019. 15:28
Xaaladda Kismaayo ayaa ka duwan sidii hore kadib markii ay ka degeen ciidamo ka tagay Muqdisho.
Xubno kasoo "goostay" Al-Shabaab oo lasoo bandhigay [Sawirro]
Soomaliya 29.06.2018. 01:03
Waa kuma qofkii fuliyay Qaraxii Ismiidaaminta ee Baar-Sanguuni?
Soomaliya 12.06.2018. 23:04
Askari la la'yahay iyo Meydad lasoo bandhigay kadib weerarkii Sanguuni
Soomaliya 24.07.2018. 10:52
Abaabul dagaal oo ka socda duleedka Kismaayo
Soomaliya 17.06.2018. 10:59
Heshiis laga gaarey Khilaafkii Villa Somalia iyo Jubbaland [Sawirro]
Soomaliya 15.03.2019. 00:56
Jubbaland oo amaro culus dul-dhigtay AMISOM [Maxaa soo kordhay?]
Soomaliya 20.06.2018. 11:59
Farmaajo oo dhameystiray Heshiiska Axmed Madoobe [XOG CUSUB]
Soomaliya 02.04.2019. 15:10